Android ဖုန်းအသုံးပြုသူရဲ့Location Service ကိုပိတ်ထားရင်တောင် Google ကသိရှိနိုင်ဟုဆို
6 Oct 2018 . 8:10 PM
စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ Location နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုပဲပိတ်ပိတ် Google က တိတ်တဆိတ်ရယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေဘက်က ဘယ်လိုပဲအတိအကျ တရားဝင်တောင်းဆိုပေမယ့် Google ကတော့ သူတို့စိတ်တိုင်းကျလုပ်ဆောင်နေတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
Google ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကတော့ အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ Location Service ကိုပိတ်ထားမယ်၊ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Apps တွေကိုမသုံးဘူး၊ ပြီးတော့ SIM Card ကိုပါဖြုတ်ထားဦးမယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့ တည်နေရာကို Google ကထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်လို့ Quartz ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ( Quartz https://qz.com ကတော့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ သတင်းတွေကိုသုတေသနလုပ်ပြီး မှန်ကန်တိကျတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်) ဒီအကြောင်းကို ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ Google ကတော့ အခုချိန်ထိ ထောက်လှမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မတိုင်ခင် Quartz ရဲ့ဖော်ထုတ်မှုအရ Google ဟာ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူရဲ့ တည်နေရာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖုန်းတာဝါတိုင်တွေကနေတစ်ဆင့် Cell ID Codes တွေကိုအသုံးပြုပြီး ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုရယူနေကြောင်း ပေါ်ပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Mobile Network မြန်နှုန်းနဲ့ စာတိုပေးပို့တဲ့အခါ ပိုပြီးမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း Google ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Cell ID Codes တွေကိုအသုံးပြုပြီး User Data ရယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်ထိ Data တွေရယူနေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ အခုလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးကို Google ကလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတချို့ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကယ်၍များသင်ဟာ လုံခြုံရေးအရသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်ဆိုရင် Android OS အစားတခြား OS ကိုအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ Google အနေနဲ့အသုံးပြုသူရဲ့အချက်အလက်တွေ၊ တည်နေရာတွေကို ဘယ်လိုပဲ ရယူခြင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောပြော အလွယ်တစ်ကူယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတယ်ပဲပြောပြော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်နဲ့ တည်နေရာကိုတွေ တပါးသူသိရှိနေတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဖုန်းမှာ Location Service ကိုပိတ်ထားရင်တောင်မှ Google ကအချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Android ဖုနျးအသုံးပွုသူရဲ့Location Service ကိုပိတျထားရငျတောငျ Google ကသိရှိနိုငျဟုဆို
စမတျဖုနျးပျေါမှာ Location နဲ့ပတျသကျတဲ့အခကျြအလကျတှကေို ဘယျလိုပဲပိတျပိတျ Google က တိတျတဆိတျရယူနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဖုနျးအသုံးပွုသူတှဘေကျက ဘယျလိုပဲအတိအကြ တရားဝငျတောငျးဆိုပမေယျ့ Google ကတော့ သူတို့စိတျတိုငျးကလြုပျဆောငျနတော ပျေါလှငျနပေါတယျ။
Google ရဲ့ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးကတော့ အတျောလေးကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ သငျ့ဖုနျးမှာ Location Service ကိုပိတျထားမယျ၊ Google နဲ့ပတျသကျတဲ့ Apps တှကေိုမသုံးဘူး၊ ပွီးတော့ SIM Card ကိုပါဖွုတျထားဦးမယျဆိုရငျတောငျ သငျ့ရဲ့ တညျနရောကို Google ကထောကျလှမျးနိုငျစှမျးရှိသေးတယျလို့ Quartz ကထုတျပွနျထားပါတယျ။ ( Quartz https://qz.com ကတော့ နညျးပညာကုမ်ပဏီတှနေဲ့ သတငျးတှကေိုသုတသေနလုပျပွီး မှနျကနျတိကတြဲ့သတငျးတှကေိုထုတျပွနျတဲ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈပါတယျ) ဒီအကွောငျးကို ၂၀၁၇ နှဈကုနျပိုငျးလောကျကတညျးက ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပွီး၊ Google ကတော့ အခုခြိနျထိ ထောကျလှမျးမှုတှပွေုလုပျနဆေဲဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမတိုငျခငျ Quartz ရဲ့ဖျောထုတျမှုအရ Google ဟာ Android ဖုနျးအသုံးပွုသူရဲ့ တညျနရောတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဖုနျးတာဝါတိုငျတှကေနတေဈဆငျ့ Cell ID Codes တှကေိုအသုံးပွုပွီး ရယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုလိုရယူနကွေောငျး ပျေါပေါကျသှားတဲ့အခါမှာတော့ Mobile Network မွနျနှုနျးနဲ့ စာတိုပေးပို့တဲ့အခါ ပိုပွီးမွနျဆနျစဖေို့အတှကျသာ ဖွဈကွောငျး Google ရဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက တုံ့ပွနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Cell ID Codes တှကေိုအသုံးပွုပွီး User Data ရယူခွငျးလုပျငနျးကိုရပျဆိုငျးကွောငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့၂၀၁၇ နိုဝငျဘာလ နောကျဆုံးအပတျလောကျထိ Data တှရေယူနသေေးကွောငျးတှရှေိ့ရပါတယျ။ အခုလညျး အလားတူဖွဈရပျမြိုးကို Google ကလုပျဆောငျနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးတခြို့ထှကျပျေါလာပွနျပါတယျ။
အထကျမှာဖျောပွခဲ့တဲ့အခကျြတှကေိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ အကယျ၍မြားသငျဟာ လုံခွုံရေးအရသှားလာလှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျနရေတယျဆိုရငျ Android OS အစားတခွား OS ကိုအသုံးပွုဖို့စဉျးစားသငျ့ပါပွီ။ Google အနနေဲ့အသုံးပွုသူရဲ့အခကျြအလကျတှေ၊ တညျနရောတှကေို ဘယျလိုပဲ ရယူခွငျးမရှိပါဘူးလို့ပွောပွော အလှယျတဈကူယုံကွညျလကျခံနိုငျစရာအကွောငျးတော့မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယျလိုပဲအသုံးပွုသူတှရေဲ့ကောငျးကြိုးအတှကျ လုပျဆောငျနတေယျပဲပွောပွော ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျနဲ့ တညျနရောကိုတှေ တပါးသူသိရှိနတောဟာ ကောငျးမှနျတဲ့လက်ခဏာတဈရပျတော့မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ဖုနျးမှာ Location Service ကိုပိတျထားရငျတောငျမှ Google ကအခြိနျမရှေးသိနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
by Zawyè .2hours ago